Hawl-gallo lagu dajinayo xurguf ka soo unkuntay tuulada Xero-jaale oo hoos tagta degmada Gal-dogob ee Mudug oo soconaysa. – Radio Daljir
Seteembar 3, 2012 4:06 b 0
Gaalkacyo, Sep 03- Gudoomiye ku xigeenka Mudug Axmed Muuse Nuur oo ka warbixiyay halka ay marayaan dajinta xiisad ka dhex aloosantay beelo wada daga tuulada Xero-jaale oo laga maamulo degmada Gal-dogob ee gobolka Mudug.
Gudoomiye ku xigeenka Mudug Axmed Muuse Nuur oo ka warbixiyay halka ay marayaan dajinta xiisad ka dhex aloosantay beelo wada daga tuulada Xero-jaale oo laga maamulo degmada Gal-dogob ee gobolka Mudug.
Axmed Muuse Nuur oo waraysi siiyay Radio daljir ayaa sheegay inay saaka bilaabeen oloole ballaaran oo ay ku doonayaan soo qabashada gacan ku dhiigle dil ka gaystay tuulada Xero-jaale ka dib markii beelo ood-wadaaga ay isku maandhaafeen gacan ku haynta ceel-biyood la doonayay in laga qodo deegaankaasi, isla markaana uu ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac labada dhinaca.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay saaka tageen deegaanka Bur-saalax oo loogu sheegay inuu jooga gacan ku dhiiglihii balse uu ka sii cararay looguna sheegay inuu u gudbay dhanka deegaanka Duddun, hase ahaatee ay hada hayaan dhinicii dhaawaca gaystay ciidana ay u direen tuulada Duddun.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inay hawl-galkan ku weheliyaan maamulka saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha qaybta booliska Mudug,taliye ku xigeenka booliska iyo sidoo kale xubno ka tirsan daladda Dal-hadhso oo qayb weyn ka ah nabad ku soo dabbaalida xurguftani, Mudane Nuur-yare ayaa hadalkiisa ku soo hadal qaaday inay muhiimad siinayaan inaysan adeegsan wax awooda oo ay arintani u wajahayaan qaab qabiil oo ay adeegsanayaan shakhsiyaad sama ka talisa oo ka soo kala jeeda labada dhinac.
Ma ahan markii ugu horaysay oo gacan ka hadal dhaliya dhimasho iyo dhaawac uu ku dhex maro deegaankaaso Xero-jaale beelo ood-wadaaga oo inta badan isku maan-dhaafa ceelal biyoodyo iyo arimo kale oo isla deegaanka khuseeya sida uu Radio daljir u xaqiijiyay Saacid Maxamuud Cismaan oo ka mida dhalinyarada ku nool deegaanka Bayra oo u dhaw Xero-jaale.